Rabat Morocco obodo dị n'etiti ọdịnala na oge a | Akụkọ Njem
Louis Martinez | | Afrika, Morocco
Dabere na ọnụ mmiri nke Atlantic Osimiri Bu Regreg, Rabat nke Morocco bụ isi obodo nchịkwa nke mba ahụ. Yana Fez, Meknès na Marrakesh, ha mebere quartet nke alaeze ukwu nke mba Africa. N'agbanyeghị ogo ya, nke nwere otu nde mmadụ na ọkara, ọ bụ obodo dị jụụ nke dị iche na nke onye na-arụsi ọrụ ike. Casablanca.
Tọrọ ntọala na narị afọ nke XNUMX site Caliph Abd al-Mumim na nhazi oge ochie nke Rom, e jikọtara ya na Spain maka ihe abụọ. N'otu aka, ọ bụ obodo ebe ọtụtụ n'ime Moorish chụpụrụ mba anyị na narị afọ nke iri na asaa. Ma, n'aka nke ọzọ, ọ bụ ntọala nke nguzogide na agha megide Spain na XNUMXth na mmalite narị afọ nke XNUMX. N'ihi akụkọ ihe mere eme niile, Rabat nwere ọtụtụ ihe ncheta, ihu igwe dị mma, na-enye gị ọmarịcha gastronomy ma na-enye gị ohere idebe ọdịnala miri emi nke dị iche na nke anyị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ya, anyị na-akpọ gị òkù ka njem anyị.
1 Ihe ị ga-ahụ na Rabat nke Morocco
1.1 Kasbah nke Udayas
1.3 Mausoleum nke Mohammed V
1.4 Katidral San Pedro
1.5 Obí eze ma ọ bụ Dar-al-Mahkzen
1.7 Medina nke Rabat nke Morocco
2 Ihe a ga-eri na Rabat
3 Mgbe ị ga-esi Rabat si Morocco
4 Otu esi aga Rabat
Ihe ị ga-ahụ na Rabat nke Morocco
Ekwuwaala ụlọ ọrụ akụkọ ihe mere eme nke obodo Moroccan Ihe Nketa Uwa. Mana ọbụghị naanị na ị nwere ihe ị ga-eme ya. Nakwa n'akụkụ ndị ọzọ nke obodo ahụ, e nwere ihe ncheta ndị dị egwu. Anyị ga-eleta ụfọdụ n’ime ha.
Kasbah nke Udayas
Na ọnụ Bu Regreg, ị nwere ike ịga leta nke a ebe e wusiri ike nke owuwu ya bidoro na Almohad Empire (narị afọ nke iri na abụọ na XNUMX). Dị ka anyị gwara gị, ihe ruru puku abụọ Moors ndị a chụpụrụ na Spain biri na ya na narị afọ nke XNUMX, na-eme ka Republic of Salé nweere onwe ya.
Ọ dịgidere naanị ihe dị ka afọ iri abụọ. N’oge na-adịghị anya, Alahuitas bịara iweghara ókèala ahụ. Ọ bụ usoro ndị eze na-achị Morocco kemgbe ahụ na Kasbah ha wuru otu n’ime obí eze mbụ ha. Na mgbakwunye na nke a na mgbidi, ọhụụ Ọnụ ụzọ Bab el-Kébir na Ogige Andalusia. Anyị na-akwado ka ị hụ n'ime ihe dị oke ọnụ ahịa Ihe ngosi nka nke ihe eji achọ mma nakwa na ị na-enwe ọmarịcha echiche nke oke osimiri Atlantic ọ na-enye gị.
Ọ bụ naanị uru nke ọrụ megalomaniac rụrụ Sultan Yaquib al-Mansur na narị afọ nke iri na abụọ. Nke a gbalịrị iwu ụlọ alakụba kachasị na ụwa mgbe Samarra, na Iraq ugbu a. Otú ọ dị, mgbe onye ọchịchị ahụ nwụrụ, a gbahapụrụ ọrụ ahụ mgbe ọ bụ nanị ụlọ elu a ka a rụrụ.
Ọ dị mita iri anọ na anọ n'ịdị elu, iji rute ya, ị ga-agafe ebe obibi jupụtara na ogidi. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na ọ bụ otu ụdị ka Giralda de Sevilla.
Mausoleum nke Mohammed V
N'otu esplanade ebe ụlọ elu ahụ dị, ị ga-ahụ mausoleum a ebe e liri ha Mohammed nke mbụ, Eze mbu nke Morocco, na umu ya nwoke abuo. Ọ bụ a mara mma na-ewu nke Arabicdị Arabic-Andalusian na facade kpuchie ya na ocha mabul na elu ahihia pyramid.
A na-eji akụkụ Akwụkwọ Nsọ na ihe ịchọ mma chọọ ya mma izu ike ọdịnala North Africa. Ọ bụ ihe ịchọ mma emere site na mpempe taịlị dị iche iche.
Ga-ahụ ya na Golan square nke Rabat na Morocco na ọ wuru na mmalite nke narị afọ nke XNUMX, n'oge Nchedo French nke obodo. Na-acha ọcha, o nwere ụlọ elu abụọ na facade ya na ọ bụ otu n’ime ụlọ ụka abụọ a raara nye ofufe Katọlik nke Rabat. Nke ọzọ bụ nke San Francisco de Asís.
Obí eze ma ọ bụ Dar-al-Mahkzen
Dị ka aha ya na-egosi, ọ bụ ebe obibi nke eze ahụ ma ị ga-ahụ ya na mpaghara Touarga. E wuru ya na narị afọ nke iri na itoolu n'ụdị ọdịnala yana ejiri ahịhịa na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Gaghị enwe ike ịbanye na Herọd ma ọhụụ nke ya dị ebube ọnụ ụzọ na ihe niile setịpụrụ kwesịrị ya.
Ọ bụ ezie na ọ dị na mpụga, ị nwere ike ịga ebe ahụ site na ịgagharị. Ọ bụ nnukwu ebe e wusiri ike n'ime nke enwere ezigbo ya ebe ihe ochie. Na nke a ị nwere ike ịhụ site na mkpọmkpọ ebe nke nzukọ Rom ka ọ bụrụ ụlọ, minaret, mausoleums na ọtụtụ mpempe ndị ọzọ.
Ọ na-otú aha n'ihi na ụlọ benimerines, ndị Berber na-achịkwa mpaghara ahụ na narị afọ nke XNUMX na-eduzi Sultan Abu al-Hasan.
Medina nke Rabat nke Morocco
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ n'ezie ịhụ Rabat nke Morocco ọzọ ezigboHave ga-agarịrị na Medina, ya na okporo ụzọ ya ndị dị warara na ụlọ ọcha ya nwere elu ụlọ na-acha anụnụ anụnụ. Iji banye na ya, ị ga-agafe XNUMX nke narị afọ nke XNUMX Almohad mgbidi, nke gbara akụkụ ochie nke obodo ahụ, maka ọnụ ụzọ dị ka nke Bab el Alou ma ọ bụ Bab el Had. N'ime gị, ị nwere ezigbo souk nke obere ụlọ ahịa na ụlọ ebe ị na-azụta, na-ere ma na-egwu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile.
Ihe a ga-eri na Rabat
Obodo ahụ jupụtara n’ụlọ nri nri okporo ámá. Agbanyeghị, anyị anaghị akwado ka ị zụta n'aka ha. Maghị n'okpuru ọnọdụ ịdị ọcha nke ngwaahịa ndị a. Yabụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale nri Rabat na Morocco, anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gaa n'ụlọ mmanya na ụlọ nri ọ bụla nke obodo ahụ nwere.
Ọrịa ya na-adabere na akụrụngwa dịka pasta, ọka, mmanụ a honeyụ, almọnd ma ọ bụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri. Site na ndị a na ihe ndị ọzọ, rabatíes na-akwadebe efere dị ụtọ ị ga-ahụ n'anya.
N'ime ha, ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere na anyị ga-agwa gị okwu nwa nwanne nna, nke na - agwakọta semolina na akwụkwọ nri, ọkụkọ ma ọ bụ atụrụ. Ya mere, na-ezo aka kebab na Tajin, ọ bụ ezie na nke ikpeazụ abụghị uzommeputa, mana ihe ọ bụla a kwadebere n'ụdị arịa seramiiki.
A maghị nke ọma bụ efere dịka Harira, anụ, legume na tomato ofe nke a na-akwado nke ukwuu n’oge Ramadan; ihe bisara, agwa agwa; ihe kefta, jiri anụ e ghere eghe, yabasị, galik, oseose na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ eggplant zaaluk, nke nwere, na mgbakwunye na mkpụrụ osisi a, lemon, coriander na tomato ihendori. Otú ọ dị, otu n'ime nri ndị kachasị dị na Rabat bụ kpalakwukwu nduru, yiri nke anyị.
Zaalouk nke aubergines
Banyere desserts, nri nke mpaghara dị ezigbo ụtọ, nke ọ na-ejikarị eme ihe ụbọchị na miel. N'ime ngwaahịa ndị a, ndị mpi mgbada, kuki ya na almọnd; ihe seffa, ụdị ụtọ couscous; ihe Uchenna, yiri nke dị na ọdịda anyanwụ donut, na briwat ma ọ bụ achicha.
N'aka nke ọzọ, ihe ọ drinkụ drinkụ nke kacha mma na Rabat nke Morocco bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ tii na Mint. Ọ bụ ọdịnala, ruo n'ókè nke na, ọ bụrụ na e nyere gị ya, ị gaghị ajụ ya kpamkpam, dịka a na-ewere ya dị ka enweghị nsọpụrụ. Ha na-eri leben, mmiri ara ehi gbara ụka; ihe ọṅụṅụ oroma y mmiri ara ehi alimondu.
Mgbe ị ga-esi Rabat si Morocco
Alawite obodo ewetara a ọnọdụ ihu igwe nke dịkarị na Mediterenian. Winters na-atọ ụtọ, na-ajụkarị oyi ogo iri na abụọ na mmiri ozuzo na ifufe mgbe niile.
Oge udu mmiri na-ekpo ọkụ mana ọ naghị ekpo oke ọkụ, dịka ikuku ikuku na-eme ka ihu igwe dị nro. N'oge a, nkezi okpomọkụ dị gburugburu ogo iri abụọ na abụọ, ọ bụ ezie na a na-edebanyekwa ndị ọzọ dị elu karịa.
Yabụ, oge kachasị mma iji gaa Rabat na Morocco bụ mmiri na udu mmiri. Arebọchị dị ezigbo ụtọ ma ị gaghị ahụ ọtụtụ njem dị ka oge ọkọchị.
Mausoleum nke Mohammet V
Otu esi aga Rabat
Obodo nwere Ọdụ ụgbọ elu Rabat-Salé, nke dị kilomita asaa site na ya. Zọ kachasị mma iji ruo ebe obibi gị n'obodo a bụ bọs, nke dakwasịrị gị n'akụkụ ọdụ ụgbọ oloko.
N'otu oge n'obodo ahụ na ịgagharị ya, ị nwekwara ụgbọ ala. Mana ihe na-achọsi ike bụ ọrụ tagzi ya. Nwere ike ịhọrọ atọ iche: na petit tagzi, obere ụgbọala na-ese isi awọ na-acha anụnụ anụnụ; ihe nnukwu tagzi, ugbo ala ndi nwere oche ndi ozo ma ndi ozo tagzi-tagzi. Agbanyeghị, n'ime nke ọ bụla, ị ga-emerịrị ya ahia ahia. Nwere ike ịkwụsị ịkwụ ọkara nke ihe a rịọrọ gị.
Na mmechi, Rabat bụ a ngwakọta nke ọdịnala na oge a nke ahụ ga-atọ gị ụtọ. O nwere ihe ncheta mara mma, nri mara mma na ọdịdị mara mma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Afrika » Rabat Maroko